EPL: Manchester City oo martay kooxda Watford oo ay ku soo dhawaysay garoonkeeda Etihad…+ SAWIRRO – Gool FM
EPL: Manchester City oo martay kooxda Watford oo ay ku soo dhawaysay garoonkeeda Etihad…+ SAWIRRO
Haaruun December 14, 2016
(Manchester) 15 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul ka gaartay naadiga Watford oo ay ku soo dhawaysay garoonkeeda Etihad kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay uga badisay 2-0.
Manchester City ayaa goolka hore waxaa u dhaliyey 33’daqiiqo Pablo Zabaleta, kaddib caawin uga timid saaxiibkiis Kevin de Bruyne, kulanka ayaana lagu kala nastay Man City oo 1-0 ku hoggaaminaysay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man City ayaa dheereystay hoggaanka ciyaarta waxaana goolka labaad u dhaliyey Sky Blues xiddigooda David Silva 86’daqiiqo kaddib caawin uu ka helay Sterling, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-0 ay ku adkaatay Man City.
Kooxda Manchester City ayaa haatan fadhisa kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 33-dhibcood, waxaana ay hal dhibic oo qura ka dambaysaa labada kooxood ee ka sarreeya ee Liverpool iyo Arsenal, kuwaasoo wadaaga min 34-dhibcood.
EPL: Kooxda Chelsea oo lix dhibcood oo nadiif ah ku qabtay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, kaddib markii ay guul dirqi ah ka soo gaareen Sunderland…+ SAWIRRO
EPL: Zlatan Ibrahimovic oo dhammaadkii ciyaarta guul ku hoggaamiyey kooxdiisa Man United, xilli saddex dhibcood oo muhiim u ah ay ka soo qaateen Crystal Palace…+ SAWIRRO